Shirkada TeleSom oo raaligelin ka bixisay adeegyada khadka taleefanada oo shalay hawada ka maqnaa, cillad farsamo awgeed. – Radio Daljir
Shirkada TeleSom oo raaligelin ka bixisay adeegyada khadka taleefanada oo shalay hawada ka maqnaa, cillad farsamo awgeed.
Luulyo 20, 2010 12:00 b 0
Buuhoodle, July 20 – Iyadoo maalintii shalay uu hawada ka baxday adeega taleefanda ee shirkadda Isgaadhsiinta ee TELESOM Buuhoodle sababo la xidhidha cilad dhanka farsamada ah, arintaasi oo sababtay in dad shacab ahi ay dhagax tuuraan xafiisyada shirkaddu ku leedahay magaaladda Buuhoodle ee gobolka Cayn, ayaa maanta waxaa arintaasi jawaab ka bixiyey maamulka Shirkadda Isgaadhsiinta ee Teleosm Buuhoodle.
Maqnaanshaha anteenadda ayaa sababtay kadib markii dabaylo xoogan oo dhacayey 24-kii saac ee u danbeeyey ay leexiyeen baalaha shirkada u soo qabta signalka oo ku yaala duleedka deegaanka Adhi-boob oo qiyaastii 10km u jirta degmada Horufadhi ee gobolka Cayn.
Hadaba si arimahani dadweynaha loogu soo bandhigo ayaa wafti balaadhan oo uu hogaaminayo maamulka shirkadda TeleSom ayaa saaka ka ambabaxay magaaladda Buuhoodle, kuwaasoo u kicitimay gGoobta ciladu ka dhacday.
Waftigan oo isugu jiray cuqaal, aqoonyahano, waxgarad, warbaahin, maamulka gobolka, ganacsato iyo culimo ayaa gaadhey goobtaasi,halkaasi oo maamulka iyo injineeradda shirkaddu dadweynaha ugu soo bandhigeen ciladda oo ahayd towerka ama baalaha oo qalooc baaxad weyn dabayshu u gaysatey.
Intaasi kadib ayaa waxaa goobta shir jaraa’id si wada jir ah ugu wada qabtay maamulka shirkadda iyo waftigiii la socdey.
Ugu horayna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha shiradda Isgaadhsiinta TELESOM, qaybteeda gobolka Cayn Caaqil Cabdisamed Cali Xasan oo sheegay in cilladu aysan ka dhicin meel kale, islamarkaana ay ciladaasi ku timid qadar rabi. Maamulaha ayaa ka hadlay dad xalay rabshadeeyey xafiisyadda shirkadda kuwaasi oo uu sheegay in ay ahaayeen macaamiisha shirkadda oo si khaldan wax loogu sheegay.
Sidoo kale, waxaa halkaasi ka hadlay Caaqil Cabdillaahi Xasan Qanbi oo ka mid ah ahaa Cuqaashi waftiga la socotay. Caaqilka ayaa uga tacsiyeeyey Shirkadda Telesom dhibaatooyinka uga yimid macaamiisha iyadoo ay dhacday cilad dhanka towerka ah; Caaqilka ayaa sheegay in ay idhahooda ku arkeen ciladda dhacday.
Waxaa hadalka isaga danbeeyey Cuqaal Iyo Odayaashii waftiga ka mid ahaa oo dhamaantood wax laga xumaado ku tilmaamay shaqaaqadda salfudaydka ku dhacay ee macaamiisha shirkadu ugu kaceen sida hubsiimo la’aanta ah.
Sh. Axmed Xaaji Saleebaan oo ka mid ahaa culimadii goobta gaadhey ayaa isna goobta ka hadlay.
Khudbadaha waftiga booqday goobta cillada farsamo ka dhacday …
Waxaa waftiga ka mid ahaa Guddoomiyaha Gobolka Cayn Xariir Maxamuud Axmed oo halkaasina hadal kooban kasoo jeediyey.
Gabagabadii, waxaa shirka ka hadlay Eng. Cismaan Daroor oo ka mid ahaa injineerada shirkadda ee iyagu gacanta ku hayey ciladda soo wajahday shirkadda.
Si kastaba ha ahaatee, dhamaan dadkii tegey goobta ciladu ka dhacday ee shirkadda TELESOM ayaa gebi ahaanba u garaabay shirkadda iyagoo uga tacsiyeeyey khaladaadka ay shirkadda kula kaceen macaamiisheedda oo ay sheegeen in ay si xusn wax u fahmeen.
Qorane Cabdi Cali oo ahaa sarkaal ka tirsan ilaalada Villa Somaliya oo u galay Al-shabaab.
Warbixn ku saabsan shirka madaxda Afrika uga furmi doona Uganda, lagu gorfayn doono dawrka ciidanka AMISOM ee Somaliya.